A na-emechi nchọpụta ọdịnala, na-agwụ ike, ma wepụ ya na ndụ. Ugbu a, anyị nwere ike ịjụ ajụjụ ndị na-emeghe, ihe na-atọ ụtọ, na ndị ọzọ agbakwunyere na ndụ.
Usoro nyocha usoro nyocha niile gbara ndị na-eme nchọpụta ume ka ha chee echiche banyere nchọpụta nnyocha dịka akụkụ abụọ: ịchọta ndị na-azaghachi ma jụọ ha ajụjụ. Na nkeji nke 3.4, m tụlere otú ọnụọgụ oge dị iche iche si agbanwe otú anyị si enwetaghachi ndị zara, ma ugbu a, m ga-atụle otú o si enyere ndị nchọpụta aka ịjụ ajụjụ na ụzọ ọhụrụ. A ga-eji usoro ihe ọhụrụ ndị a ma ọ bụ ihe omume gbasara ihe omume ma ọ bụ ihe na-agaghị emetụta.
Otu nnyocha e mere mode bụ gburugburu ebe obibi nke ndị a jụrụ ajụjụ, na o nwere ike dị mkpa metụtara na n'ihe (Couper 2011) . Na oge mbu nke nnyocha nyocha, ọnọdụ kachasịsịsị ihu na ihu, ma n'oge nke abụọ, ọ bụ ekwentị. Ụfọdụ ndị nnyocha na-ele oge nke atọ nke nchọpụta nnyocha dịka ọ bụ mmeba nke usoro nyocha iji tinye kọmputa na ekwentị mkpanaaka. Otú ọ dị, afọ dijitalụ karịrị nanị mgbanwe nke pipụ bụ nke ajụjụ na azịza na-agba. Kama nke ahụ, mgbanwe site na analog na dijitalụ na-enye aka - ma ọ ga-achọ-ndị nchọpụta ịgbanwe otú anyị si ajụ ajụjụ.
Nnyocha nke Michael Schober na ndị ọrụ ibe ya (2015) egosipụta abamuru nke ịmegharị usoro ọdịnala ka mma iji jikọọ usoro mkparịta ụka dijitalụ. N'ime nnyocha a, Schober na ndị ọrụ ibe gị jiri ụzọ dị iche iche tụnyere ịjụ ndị mmadụ ajụjụ site na ekwentị mkpanaaka. Ha tụnyere ịnakọta data site na mkparịta ụka olu, nke ga-abụ nsụgharị nkịtị nke oge nke abụọ, na-anakọta data site na ọtụtụ microsurveys e zigara site na ozi ederede, ọbịbịa n'enweghị ihe doro anya. Ha chọpụtara na microsurveys zitere site na ozi ederede na-eduga na data dị elu karịa ajụjụ ọnụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nanị ịnyefe akwụkwọ ochie ahụ n'ime onye ọhụụ ọhụrụ ahụ emeghị ka data dị elu. Kama nke ahụ, site na iche echiche nke ọma banyere ike na usoro mmekọrịta na gburugburu igwe, Schober na ndị ọrụ ibe ha nwere ike ịzụlite ụzọ ka mma iji jụọ ajụjụ ndị na-eduga nzaghachi dị elu.
E nwere ọtụtụ akụkụ nke ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịkọwa ụdị usoro nyocha, ma echere m na akụkụ kachasị dị egwu nke usoro nyocha nke dijitalụ bụ na ha na-eji kọmputa eme ihe , kama ịza ajụjụ ọnụ (dịka na nyocha na ihu na ihu na ihu) . Inye ndị na-agba ajụjụ ọnụ mmadụ site na usoro nchịkọta data na-enye nnukwu uru ma na-ewebata ụfọdụ ihe ndọghachi azụ. N'ihe banyere uru, iwepụ ndị na-agba ajụjụ ọnụ mmadụ nwere ike belata nkwụsịtụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya , ọdịdị nke ndị na-aza ajụjụ na-agbalị itinye onwe ha n'ụzọ kachasị mma site, dịka ọmụmaatụ, arụmọrụ na-agbanyeghị mkpesa (eg, ọgwụ ọjọọ na-akwadoghị) omume (dịka, ntuli aka) (Kreuter, Presser, and Tourangeau 2008) . Iwepụ ndị na-agba ajụjụ ọnụ nke mmadụ nwere ike iwepụ nsogbu ndị na-agba ajụjụ ọnụ , a na-enwe mmetụta nke nzaghachi n'ụzọ aghụghọ site na njirimara nke onye gbara ajụjụ ọnụ (West and Blom 2016) . Na mgbakwunye na inwe ike ịmezi ziri ezi maka ụfọdụ ụdị ajụjụ, iwepụ ndị na-agba ajụjụ ọnụ mmadụ na-ebelata ọnụahịa-oge nyochaa bụ otu n'ime mmefu kachasị na nnyocha nyocha-na-eme ka mgbanwe dịkwuo ike n'ihi na ndị nwere ike nwere ike ịbịanye oge ọ bụla ha chọrọ, ọ bụghị naanị mgbe onye nyochaa dị . Otú ọ dị, iwepụ onye na-agba ajụjụ ọnụ mmadụ na-emekwa ka ụfọdụ nsogbu. Karịsịa, ndị na-agba ajụjụ ọnụ nwere ike ịmekọrịta mmekọrịta na ndị nabatara nwere ike ịba ụba ọnụ ọgụgụ, kọwaa ajụjụ ndị na-agbagwoju anya, ma nọgide na-eme ihe ndị na-aza ajụjụ mgbe ha na- (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) ajụjụ gbasara ogologo oge (Garbarski, Schaeffer, and Dykema 2016) . N'ihi ya, ịmafe site na interviewer-ndinọ nnyocha e mere na mode ka a na kọmputa-ndinọ otu emepụta ma ohere na ihe ịma aka.
Ọzọ, m ga-akọwa ụzọ abụọ na-egosi otú ndị nchọpụta pụrụ isi jiri ngwá ọrụ nke afọ dijitalụ jụọ ajụjụ dị iche iche: nyochaa isi ihe dị n'ime oge na oge kwesịrị ekwesị site na nyocha oge ntanetị (ngalaba 3.5.1) na ijikọta ike nke ajụjụ nyocha a mechibidoro na njedebe site na nnyocha ndị wiki (ngalaba 3.5.2). Otú ọ dị, ịkwaga n'ebe kọmputa na-arụ ọrụ, ịjụ ajụjụ ọ bụla ga-apụta na ọ dị anyị mkpa ịmepụta ụzọ isi rịọ ka ndị ọzọ nwee obi ụtọ, usoro a na - akpọ gamification (mpaghara 3.5.3).